प्रिन्ट संस्करण - अनुसन्धान केन्द्र कसरी सुधार्ने ?डा. सुरेन्द्र घिमिरे - विविधा - कान्तिपुर समाचार
अनुसन्धान केन्द्र कसरी सुधार्ने ?डा. सुरेन्द्र घिमिरे
अनुसन्धाता हुनलाई दाता चाहिन्छ । सरकार बाहिरका दाता वा संस्थाहरूसँग पैसा लिएर हालका केन्द्रहरूले अनुसन्धान गर्न नसक्नुका तीनवटा कारण छन् । पहिलो, त्यहाँ उपलव्ध जनशक्ति र राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधिस्वरूप आएको नेतृत्वलाई विश्वास नगर्नु । दोस्रो, जान–पहिचान र पहुँचका मान्छेले त्यस्ता अनुसन्धान आफ्ना निजी संस्थामा पुर्‍याउनु । त्यस्ता मान्छेमा विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारी पनि छन् । तेस्रो, कमिसन र प्रतिशतको कुरो मिलाउन निजी संस्थालाई जति सजिलो छ, त्रिविका केन्द्रहरूलाई छैन ।
राज्यका नीति निर्माण र विश्लेषणका लागि अनुसन्धान केन्द्र त चाहिन्छ । त्यसैले देशमा त्यस्ता अनुसन्धान केन्द्रलाई सक्षम र सबल बनाउन राज्यले नै सुधारको पहलकदमी लिनुपर्छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालयको पुन:संरचना, सुधार र नियमन आवश्यक छ ।
खुल्ला बजार अर्थनीतिमा एकात्मक (मोनोपोलिस्टिक) प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जस्तो– पाँचवटा संस्थालाई चाउचाउ उत्पादन गर्न दिँदा उनीहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले जनताले सस्तोमा चाउचाउ पाएका छन् । त्यही कुरा सरकारले उच्च शिक्षामा पनि लागू गरिदियो, जुन सरासर गलत हो । जस्तो कि त्रिभुवन, काठमाडौंै, पोखरा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन विषयको सम्बन्धन देशैभरि बेच्छन् । र निजी कलेजले जुन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन सस्तो छ, त्यही किन्छन् । यो गलत अभ्यास रोक्न सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विश्वविद्यालयलाई क्षेत्र वा विषय भाग लगाइदिनुपर्छ । क्षेत्र तोक्दा क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको औचित्य बढ्छ । साथै पूर्वाञ्चलले त्रिविको आंगिक क्याम्पसको आडैमा वा त्रिविले पोखरा विविको आडैमा सम्बन्धन बेच्ने काम रोक्न सकिन्छ । विषय भाग लगाउँदा विश्वविद्यालयको विशिष्टता बढेर जान्छ र यसले शिक्षाको गुणस्तर पनि बढाउँछ । विद्यमान विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर तथा स्रोत र साधनको उपलव्धतालाई आधार मानेर यसमा निर्णय गर्न सकिन्छ । त्यसपछि त्यही अनुरूप शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ ।
भोट उसैलाई मंसिर २, २०७४पूरा पढ्नुहोस्